Ad Number S-9689571
ရတနာမိန်းလမ်းမပေါ် မလိခအိမ်ရာရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်းရောင်းမည်။
မလိခအိမ်ရာ၊ ရတနာမိန်းလမ်းမပေါ် ၊သ...
095183179, 09450035343, 09975040260
Ad Number S-9687601
သင်္ဃန်းကျွန်း စံ‌ပြဈေးနီးမှာ မြေညီထပ်ရောင်းမည်။
#RES736 #သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြဈေးနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်7လမ်းမ...
Ad Number S-9682100
သင်္ဃန်းကျွန်း ဘဝမြင့်မှတ်တိုင်အနီးမှာ မြေညီထပ်ခိုးအပြည့်ပါ တိုက်ခန်းရောင်းမည်။
#RES745 #BCCကျပြီး ဈေးရောင်း၊ရ...
Ad Number S-9682044
သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဈေးအနီး ပြည်တော်အေးလမ်းမှာတိုက်ခန်းရောင်းမည်။
#RES732 #သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြဈေးအနီး #ရပ်ကွက်သန့် မှာ #တိုက်ခန်းရောင...
Ad Number S-9680191
Ad Number S-9678634
Ad Number S-9688980
Ad Number S-9687838
SMART HOUSE Real Estate Co.Ltd Close
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ဘဝမြင့်မှတ်တိုင်အနီး ရိပ်သာလမ်းရှိတိုက်ခန်းရောင်းမည်
335 Lakh (Kyats)
Ad Number S-9687800
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်​ လေး​ထောင့်ကန်လမ်းမ​​​ကြီး​ပေါ်ရှိ တိုက်ခန်းရောင်းမည်
Ad Number S-9687773
Eiksetan Housing Room For Sale 2000sqft
Ad Number S-9685704
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ၄-လွှာ တိုက်ခန်း ရောင်းမည်။
Ad Number S-9684508
သဃ်န်းကျွန်း၊ ဣစိတံအိမ်ရာရှိ တတိယထပ်၊ ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်းရောင်းမည်။
Ad Number S-9684206
မြေညီထပ်ခိုးအပြည့် 17ပေ Hight အခန်းကျယ်
Ad Number S-9682990